5 ဂိုးပွတျသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ LASK ပှဲက သရဲနီတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြမြား…….
March 13, 2020 Writer News 0
ညက ကစားသှားခဲ့တဲ့ LASKနဲ့ ယူနိုကျတကျတို့ရဲ့ယူရိုပါလိဂျ (၁၆)သငျးအဆငျ့ ပထမအကြော့ ပှဲစဉျမှာ ဧညျ့သညျယူနိုကျတကျက အိမျရှငျ LASKကို အဝေးကှငျးမှာ (၅)ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျယူပွီးတော့ နောကျတဈဆငျ့ကိုတကျရောကျနိုငျဖို့အတှကျအခွအေနကေောငျးသှားခဲ့ပွီပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီပှဲစဉျကို အနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျဟာပွိုငျပှဲစုံနောကျဆုံး(၁၁)ပှဲဆကျတိုကျရှုံးပှဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ နညျးပွဆိုးလျရှားအနနေဲ့ ယာယီနညျးပွဘဝက (၁၁)ပှဲဆကျတိုကျရှုံးပှဲမရှိခဲ့တဲ့ စံခြိနျကိုပွနျပွီးတော့ လိုကျမီသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲစဉျမှာ ယူနိုကျတကျတို့ဟာ အီဟာလို၊ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈ၊မာတာ၊ ဂရငျးဝုဒျ၊ ပါရဲရားတို့ရဲ့ သှငျးဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျယူသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီပှဲက ယူနိုကျတကျကစားသမားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျ အဆငျ့တှကေိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ရိုမဲရိုသာယာတဲ့ပှဲလို့ဆိုရပါမယျ။ အလုပျမြား ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ တဈပှဲ မဖွဈ ခဲ့ရ ပါဘူး ။ ဘောလုံး ဖွနျ့ဝမှေု တှေ အားနညျးခဲ့ပါတယျ ။
ဘောလုံး ကိုငျ ကစားတာ ကောငျးမှနျ ခဲ့ပွီး တညျငွိမျတဲ့ ကစားဟနျ ကို ပွသ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ အခြိတျအဆကျပိုငျးလညျးမဆိုးပါဘူး။
ဘိုငျလီ – 7
အရေး ပါတဲ့ ပိတျဆို့ ဟနျ့တားမှု အခြို့ ကို လုပျဆောငျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ပှဲစဉျအတှကျအကောငျးဆုံးထောကျပံ့ပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ခံစဈ ကစားပုံ တညျငွိမျ ခဲ့ပွီး ခေါငျးတိုကျ ဂိုးသှငျး နိုငျခှငျ့ ရခဲ့ ပမေယျ့ လှဲခြျော ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ခံစဈ ကစားပုံကောငျးခဲ့သလို၊ အထငျကွီးဖှယျ ခွစှေမျး တှကေို လညျး ပွသ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ရရှိလာတဲ့အခှငျ့အရေးတှကေိုအကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ အသုံး မခြ နိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အပိုငျးမှာလညျး လှဲခြျောမှု အနညျးငယျ ရှိခဲ့ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နှဈဂိုး ဖနျတီးပွီး ခွပေ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ကှငျးလယျနရောကိုအကောငျးဆုံးထိနျးသိမျး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ ဂိုးပေါကျ ကနျခှငျ့ နဲ့ ခေါငျးတိုကျခှငျ့ ရရှိခဲ့ ပမေယျ့ ဂိုး အဖွဈ မပွောငျးလဲ နိုငျခဲ့ ပါဘူး ။
ကောငျးမှနျ လှတဲ့ ရှလြေ့ားမှုတှေ လုပျဆောငျ နိုငျခဲ့ သလို ဂိုးသှငျး ခဲ့ရာ မှာလညျး နရောယူ ကောငျးခဲ့
ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ- 8
ယူနိုကျတကျမငျးသားကွီးကတော့ ပွိုငျဖကျ ခံစဈ ကစားသမား တှကေိုထုံးစံအတိုငျးဒုက်ခ ပေးနိုငျ ခဲ့ပွီး အီဟာလို ရဲ့ ဂိုးကိုလညျး ဖနျတီး ပေးနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
ပုံစံကောငျး ပွနျလညျ ပွသ နိုငျခဲ့ပွီး သွဂုတျလ နောကျပိုငျး အသငျး အတှကျ ပထမဆုံး အကွိမျ ဂိုး ပွနျလညျ သှငျးယူ ပေးနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
အဖှငျ့ဂိုး အတှကျ အဆုံးသတျ စှမျးဆောငျရညျ အထူး ကောငျးခဲ့ သလို ဂြိမျးဈ ရဲ့ ဂိုး ကိုလညျး ဖနျတီး ပေးနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။လူစားဝငျကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ တာဟဈခြောငျ၊ ပါရဲရား၊ ဂရငျးဝုဒျတို့ကတော့ အဆငျ့သတျမှတျခကျြ6ရရှိပါတယျ။ ယူနိုကျတကျတို့ဟာဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှာ (၅၆)ရာခိုငျနှုနျးသာရှိခဲ့ပမေဲ့ ဂိုးကနျသှငျးခှငျ့တှေ အမြားအပွားပွုလုပျသှားနိုငျခဲ့ပွီးတော့ တဈပှဲလုံးမှာ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု (၂၂)ကွိမျအထိပွုလုပျနိုငျခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ LASKအသငျးကတော့ ယူနိုကျတကျကို အိမျကှငျးမှာ ခပျတငျးတငျးနဲ့ တုနျ့ပွနျကစားနိုငျခဲ့ပမေဲ့ အရာမထငျခဲ့ပဲဂိုးကနျသှငျးမှု(၉)ကွိမျမှာ ဂိုးပေါကျတညျ့မတျမှု (၁)ကွိမျမှ မရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဖာနနျဒကျဈ၊ဖရကျဒျတို့ဦးဆောငျတဲ့အားအပွငျ ဂြိမျးဈ၊ မာတာ၊ အီဟာလိုတို့ရဲ့ အားတှကေ ယူနိုကျတကျကိုအသာစီးရစခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
5 ဂိုးပြတ်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ LASK ပွဲက သရဲနီတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ…….
ညက ကစားသွားခဲ့တဲ့ LASKနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ယူရိုပါလိဂ် (၁၆)သင်းအဆင့် ပထမအကျော့ ပွဲစဉ်မှာ ဧည့်သည်ယူနိုက်တက်က အိမ်ရှင် LASKကို အဝေးကွင်းမှာ (၅)ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ယူပြီးတော့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်ကို အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်ဟာပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး(၁၁)ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နည်းပြဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ယာယီနည်းပြဘ၀က (၁၁)ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိခဲ့တဲ့ စံချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ လိုက်မီသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တက်တို့ဟာ အီဟာလို၊ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်၊မာတာ၊ ဂရင်းဝုဒ်၊ ပါရဲရားတို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲက ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရိုမဲရိုသာယာတဲ့ပွဲလို့ဆိုရပါမယ်။ အလုပ်များ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် တစ်ပွဲ မဖြစ် ခဲ့ရ ပါဘူး ။ ဘောလုံး ဖြန့်ဝေမှု တွေ အားနည်းခဲ့ပါတယ် ။
ဘောလုံး ကိုင် ကစားတာ ကောင်းမွန် ခဲ့ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ ကစားဟန် ကို ပြသ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အချိတ်အဆက်ပိုင်းလည်းမဆိုးပါဘူး။
ဘိုင်လီ – 7
အရေး ပါတဲ့ ပိတ်ဆို့ ဟန့်တားမှု အချို့ ကို လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ပွဲစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ခံစစ် ကစားပုံ တည်ငြိမ် ခဲ့ပြီး ခေါင်းတိုက် ဂိုးသွင်း နိုင်ခွင့် ရခဲ့ ပေမယ့် လွဲချော် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ခံစစ် ကစားပုံကောင်းခဲ့သလို၊ အထင်ကြီးဖွယ် ခြေစွမ်း တွေကို လည်း ပြသ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အသုံး မချ နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အပိုင်းမှာလည်း လွဲချော်မှု အနည်းငယ် ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဂိုး ဖန်တီးပြီး ခြေပ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ကွင်းလယ်နေရာကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဂိုးပေါက် ကန်ခွင့် နဲ့ ခေါင်းတိုက်ခွင့် ရရှိခဲ့ ပေမယ့် ဂိုး အဖြစ် မပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။
ကောင်းမွန် လှတဲ့ ရွေ့လျားမှုတွေ လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ သလို ဂိုးသွင်း ခဲ့ရာ မှာလည်း နေရာယူ ကောင်းခဲ့
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်- 8
ယူနိုက်တက်မင်းသားကြီးကတော့ ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကစားသမား တွေကိုထုံးစံအတိုင်းဒုက္ခ ပေးနိုင် ခဲ့ပြီး အီဟာလို ရဲ့ ဂိုးကိုလည်း ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပုံစံကောင်း ပြန်လည် ပြသ နိုင်ခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ နောက်ပိုင်း အသင်း အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် ဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူ ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အဖွင့်ဂိုး အတွက် အဆုံးသတ် စွမ်းဆောင်ရည် အထူး ကောင်းခဲ့ သလို ဂျိမ်းစ် ရဲ့ ဂိုး ကိုလည်း ဖန်တီး ပေးနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။လူစားဝင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ တာဟစ်ချောင်၊ ပါရဲရား၊ ဂရင်းဝုဒ်တို့ကတော့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်6ရရှိပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့ဟာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှာ (၅၆)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပေမဲ့ ဂိုးကန်သွင်းခွင့်တွေ အများအပြားပြုလုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ တစ်ပွဲလုံးမှာ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု (၂၂)ကြိမ်အထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ LASKအသင်းကတော့ ယူနိုက်တက်ကို အိမ်ကွင်းမှာ ခပ်တင်းတင်းနဲ့ တုန့်ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အရာမထင်ခဲ့ပဲဂိုးကန်သွင်းမှု(၉)ကြိမ်မှာ ဂိုးပေါက်တည့်မတ်မှု (၁)ကြိမ်မှ မရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်၊ဖရက်ဒ်တို့ဦးဆောင်တဲ့အားအပြင် ဂျိမ်းစ်၊ မာတာ၊ အီဟာလိုတို့ရဲ့ အားတွေက ယူနိုက်တက်ကိုအသာစီးရစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။